Shiinaha Taabasho Qaboojiye Qabyo ah oo Soosaara Muuqaal iyo qaab-qeybiyaha qaab-dhismeedka | Yubing
Biyo diirran oo ka imanaya isha kuleylka ayaa loo tuurayaa nidaamka qaybinta biyaha ee dusha sare ee munaaradda iyada oo loo marayo tuubooyin. Biyahaani waa loo qaybiyaa oo loo qaybiyaa sagxadda qoyan ee buuxisa biyo qaboojiyeyaasha qaybiya. Isla mar ahaantaana, hawo ayaa laga soo galiyaa meelaha laga soo galo hawada hareeraha salka munaaradda waxayna u sii socotaa kor iyadoo loo marayo buuxinta qoyan ee ka soo horjeedda socodka biyaha. Qayb yar oo biyaha ka mid ah waa la uumiyaa taas oo ka dhigaysa kuleylka biyaha haray. Hawada qoyan ee diirran waxaa lagu jiidayaa dusha sare ee munaaradda qaboojinta marawaxadda loona sii daayaa jawiga. Biyaha la qaboojiyey waxay ku shubaan berkadda hoose ee munaaradda oo dib loogu celiyo isha kuleylka. Naqshaddan (dheecaanka hawada ee toosan) iyada oo la tixgelinayo hawo-kululku kor ayey u sii socotaa oo masaafad gaar ah ayaa u dhexeysa qaadashada hawo nadiifka ah iyo hawo-hawo qoyan oo diirran si loo yareeyo fursadda dib u soo celinta hawada.
Faa'iidooyinka Dhismaha Wareejinta Wareegga Furan:
Isticmaalka Tamarta Dhiman (Waa taawarka ugu waxtarka badan qaboojinta warshadaha)
Saameynta Deegaanka ee Hooseysa (Dhawaqa howlgalka oo hooseeya iyo taageerayaasha waxtarka leh ee qiimaha leh)
Cimri dherer iyo Miisaan-fudud oo loogu talagalay rakibid iyo dayactir fudud.
Qaabdhismeedka Cadaadiska Sare si loo buuxiyo dabaysha iyo shuruudaha dhulgariirka.
Xulashada Fudud ee qaybaha muhiimka ah ee loogu talagalay mashaariicda loogu talagalay.
Qaab dhismeedka iyo Guddiyada
Munaaradaha qaboojinta ICE waxay isticmaalaan xaashida birta ah ee dahaarka u adkaysta wasakhda aadka u saraysa taas oo ka kooban zinc maadada asaasiga u weyn, oo ay weheliso Al, Mg iyo raad raad silikoon ah.
Birta (isla sheyga sida xayndaabka) saxanka oo lagu dhamaystiray naqshad jaranjaro hoose si looga fogaado fadhiidka biyaha. Waxayna ka kooban tahay isku xidhka marin biyood ka soo baxa oo leh miiraha ka hortagga vortex-ka, isku xidhka dhiiga iyo qulqulka, isku xidhka biyaha ee kaamil ah oo lagu buuxiyo qalabka wax lagu buufiyo (float valve), qalab xoojiya hawo-geliyaha hawo-biyoodka PVC oo la xoojiyay iyo dhuumaha dhiigga ka baxa.
Qoyan Deck Buuxi / Isweydaarsiga Kuleylka
Munaaradda qaboojiyaha furan ee ICE waxaa lagu qalabeeyaa xirmada khafiifka ah ee uumi baxa uumiga ka sameysan ee ka sameysan foornooyinka PVC oo si isku dhafan loo qaabeeyey si loo hagaajiyo qulqulatada dareerayaasha si loo kordhiyo waxtarka kuleylka.
ICE munaarado qaboojiye wareegsan oo furan oo lagu rakibay jiilkii ugu dambeeyay ee taageerayaasha axial, oo leh isku dheelitirnaan dheellitiran iyo garbaha la hagaajin karo oo leh muuqaal waxtar sare leh Taageerayaasha buuqa yar ayaa lagu heli karaa dalabka.
Hore: Nooca Dhalada Wareegsan-Towers Qaboojinta
Xiga: Wareegyada Wareegsan ee Wareegsan ee Wareegtada Wareegga / Qaboojiyaha Xirmooyinka Wareegga Wareegga
Munaarad qaboojiyaha oo nooca afar gees ah